Cryptocurrency ရေစီးကြောင်း ( Henry Aung ) — PALNet
Cryptocurrency ရေစီးကြောင်း ( Henry Aung )
kachinhenry in HIVE-MYANMAR •3months ago
မင်္ဂလာပါ။ Cryptocurrency ဈေးများကတော့ တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြင့် ဈေးကစားနေကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Hive နှင့် Leo ကလွဲပြီး သိပ်မျှော်လင့်စရာမရှိပါ။ သို့သော် Hive နှင့် Leo ကလည်း cryptocurrency ပဲမို့ တနည်းနည်း ဖြင့်တော့ မျှော်လင့်နေရသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Hive ကလည်း တိတ်တစိတ်နှင့် ဘာတွေကြံစည်နေသည်မသိ။ တလောက Updated တွေ့လိုက်သည်ကတော့ Gaming project များ ထပ်တိုးလာမည့် အနေအထားများ တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ Blockchain game များကလည်း ဝင်ငွေရလမ်းနှင့် ပတ်သက်သဖြင့် စလိုက်သည်နှင့် အကောင့်တု ပေါင်းများစွာဖြင့် ဝင်ရောက် ကစားကြသောကြောင့် စည်းကမ်းများ တင်းကျပ်သွားရကာ Reward များလည်း တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချလာကြသည်သာ။
ယခင်က Drugwar ယခု Cryptobrewmaster ။ သိပ်ပြီးမျှော်လင့်စရာ မရှိသလို ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်မှုများ ဖြစ်မလာခဲ့ကြပါ။တလောကတော့ Leofinance ၏ ကြေညာချက်တစောင် တွေ့ရပါသည်။ မကြာခင် ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလည်းမှု လုပ်ဆောင်လာမည့် အကြောင်း။ မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလည်း လာမည်တော့မသိသေးပါ။
သို့သော် ကျွန်တော့အထင် သူရို့ Facebook နှင့် Tweeter ကဲ့သို့ microblogging အတွက် ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဤ microblogging သည် ယခင်က Steemit တို့ မက်ခဲ့သည့် အိမ်မက်ဖြစ်ပါသည်။ Facebook နှင့် Tweeter ကဲ့သို့ အကောင့် ဖွင့်ရလွယ်ကူရမည် ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူရမည် ဥပမာ ( photo / video clip / live ) စသည်တို့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ရပါမည်။
အကယ်၍ Leofinance သာ microblogging အောင်မြင်သွားလျင် Social media အလှည့် အပြောင်း တခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ like ပေးယုံမျှဖြင့် ဝင်ငွေရကြတော့မည်။ သို့သော် မိမိတို့ voting power အား ထိန်းချုပ်ကြရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ Blockchain Social media အတွက် တခုအားနည်းချက်မှာ အကယ်၍ Leofinance အောင်မြင်လာလျင် power အားကြီးသူတို့က Vote ရောင်းစားကြမည်။ power အားကြီးသူတို့က တနေ့လျင် Post ၁၀ခု မက တင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို Vote ယူရင်း ဝင်ငွေရှာကြတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ ဘယ်လိုမှ လွန်ဆန်မရသည့် သဘောဖြစ်ပါသည်။ ယခင် Steemit တွင်လည်း ကြုံဘူးခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ပြသနာတိုင်းတွင် အဖြေရှိကြသည်သာ ဖြစ်၍ ပညာရှင်တို့က အဖြေရှာကြပါလိမ့်မည်။ Blockchain လောက Cryptocurrency ဝက်ဝက်ကွဲ ဖြစ်ရန် အတွက် Killer Dapp တခုလိုနေသည်ကတော့ အမှန်အကန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ Leofinance သာ ထိုပြသနာများအား ဖြေရှင်းနိုင်၍ microblogging site လွှင့်တင်နိုင်ခဲ့သော်။ Blockchain လောကသည် ညင်ညင်သာသာ ဖြင့် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလည်းနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် အပြောင်းအလည်း နောက်ကို လိုက်ပါ စီးမျောနိုင်ဖို့သာ လိုပါသည်။
Henry Aung ( Kachin )
02/12/2020 - Wednesday- 10:53 Hrs
#myanmar #cryptocurrency #knowledge #sharing #palnet #leo #neoxian
3 months ago in HIVE-MYANMAR by kachinhenry
walarhein3months ago
Leo ကတော့ မှန်မှန်ချီတက်နေဆဲ။
Hive ဈေးလေး လှုပ်ရင်တော့ ပျော်စရာပါ။
phusionphil3months ago
I don't haveaproblem with vote selling, but I would like to see less fake accounts. I have7all accounts but I use them for smart contracts and don't even have Hive Powered up on them.
It would be nice to seeabalance between quality content and curation focused voting bots.
Maybeastandards of procedure for voting bots and vote selling should be establish within our communities to make sure that violators are punished inaway consensus could verify.
If consensus was achieved, that would start us in the right direction.
But then we have the next issue which is secular elitism, as you mentioned, that could lead to the top wallets controlling everything even after consensus isaachieved.
tin.aung.soe3months ago
LeoFinance က လောလောဆယ်တော့ Crypto and Finance အကြောင်းသာ လက်ခံထားပါသည်။ Power အားကြီးသူတို့က အထောက်အပံ့ ပေးနေကြသလို downvote ဖြင့်လည်း ထိန်းကွပ်နေကြပါသည်။
Microblogging ဖြစ်လာလျှင်လည်း စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းမှု ထားရှိကြမည် ထင်ပါသည်။
Hive က Hivefest ကျင်းပဖို့ ရှိနေတယ် ထင်ပါတယ်။
ကိုဟင် လေ့လာပြီး မျှဝေပေးပါဦးဗျ။